Muxuu ka yiri Mikel Arteta dib ugu soo laabashadiisa kooxda Arsenal? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mikel Arteta dib ugu soo laabashadiisa kooxda Arsenal?
Dajiye December 20, 2019
(London) 20 Dis 2019. Mikel Arteta ayaa muujiyay sida weyn uu ugu faraxsan yahay inuu la wareego shaqada tababarka kooxda Arsenal.
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ku dhawaaqday in Mikel Arteta uu yahay macallinkeeda cusub, waxaana uu u saxiixay heshiis saddex sanadood iyo bar ah kaasoo gaaraya ilaa iyo 2023-ka.
Haddaba Arteta ayaa wareysi uu ku bixiyay Website-ka rasmiga ah ee kooxda Arsenal wuxuu ku muujiyay sida weyn uu ugu faraxsan yahay inuu la wareego shaqada tababarka kooxda Arsenal wuxuuna yiri:
“Tani waxay ii tahay sharaf weyn aniga ahaan, Arsenal waa mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka, waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno abaal-marinada ugu fiican kubadda cagta, tanina waa la ii cadeeyay intii aan wadahadalka kula jiray Josh Kroenke iyo dhamaan shaqsiyaadka ugu waaweyn kooxda”.
“Waxaan wada ognahay inay jiraan hawlo badan oo ay tahay inaan qabanno si aan u gaarno wax walba oo aan rabno, laakiin waan hubaa inaan qaban karno”.
“Waxaan ka war qabaa in wax walba aysan ku dhici doonin hal habeen, laakiin kooxda waxay leedahay hibo aad u badan waxaa jirta ciyaartoyda badan oo dhalin yaro ah ee ka imaaneysa akadeemiyada” ayuu hadalkiisa ku soo xiray macalinka cusub ee kooxda Arsenal Mikel Arteta.
RASMI: Arsenal oo ku dhawaaqday macalinka leylin doona kulanka Everton…(Ma Mikel Arteta mise Ljungberg?)
Rivaldo oo sheegay waxa ka maqnaa kooxda Barcelona kulankii El Clasico